दशैं - खेलाडीहरु कसरी मनाउँदै छन् ? - Khelpati
दशैं - खेलाडीहरु कसरी मनाउँदै छन् ?
सोमवार, आश्विन २०, २०७६ गिता राई
काठमाडौं । दशैं नेपालीहरुको ठुलो पर्व हो । नेपालीहरुले दशैँलाई भव्यताको साथ मनाउने गर्छन् ।
सधै देशको नाम उचो राख्न मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहने खेलाडीले पनि दशैं मनाउँदै छन् । खेलाडीको दशैं स्पेशल योजना के छ त ?
सरस्वती चौधरी (भलिबल खेलाडी )
अहिले हाम्रो कम छुट्टी छ । त्यसैले खासै योजना बनाउन सकेको छैन । पहिला परिवारलाई भेट्ने आफन्तहरुलाई पनि भेट्थ्यौ । अब चै भेट्न पाउदैन जस्तो लाग्छ थोरै छुट्टी छ त्यही भएर । अहिले फोकस खेलमा छ । जसको कारण चाडपर्व तथा सेलिब्रेसनहरुमा ध्यान छैन । अहिले सोच भनेकै खेललाई कसरी जित्ने भन्नेछ । यो चाड भन्ने कुरा पटक पटक आइरहेको हुन्छ तर यो खेल भने पटक पटक खेल्न पाइन्न ।
साग गेम्स आउदैछ । हामीले मिहिनेत गरिरहेका छौ । हाम्रो लक्ष्य भनेको गोल्डमेडल हो ।
मण्डेकाजी श्रेष्ठ (कराते खेलाडी)
हामीले अहिले सागको लागि बिहान बेलुका नै ट्रेनिङ गरिरहेका छौ । धेरै भयो बन्द प्रशिक्षणमा बसेको यसपालीको दशैंमा परिवारसँग समय बिताउने विचारमा छु ।
शनिबार घर नयाँ ठिमी जान्छु र परिवारसँग दशैं मनाउछु । पहिला त साथीभाईहरुसँग भेटघाट गरी काठमाडौं बाहिर गएर दशैं मनाइन्थ्यो तर यसपाली बन्द प्रशिक्षण भएकाले काठमाडौं भन्दा बाहिर जाँदिन ।
हामी अहिले सागको लागि फोकस छौ । यहाँ नै परिवारसँग रमाइलो गर्ने विचारमा छु । हामीलाई थोरै बिदा दियो भन्दा पनि हाम्रो लक्ष्य भनेको साग खेल हो । यसमा नै हामी खेलाडी सन्तुष्टिमा छौं, यो बिदा दिनु नै ठूलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई ।
हाम्रो लक्ष्य भनेको गोल्ड छ त्यहीं भएर ४–५ दिन नै हाम्रो लागि सन्तुष्टि जनक नै छ । यत्तिको बिदा दिनुपनि हाम्रो लागि ठूलो कुरा हो ।
मेरोतर्फबाट सबैलाई ‘ह्याप्पी विजयादशमी’ भन्न चाहन्छु । र, आउदै गरेको सागमा आ–आफ्नो विधाबाट सबैले स्वर्ण पदक जितोस्र राष्ट्रिको लागि नाम राखोस् भन्ने चाहन्छु ।
सिपोरा गुरुङ ( भलिबल खेलाडी )
करिब २ वर्षपछि नेपाल आएको छु । हामीले खासै त दशैं मनाउदैनौ तैपनि यो दशैंमा परिवारसँग धेरैभन्दा धेरै समय बिताउने योजना छ ।
अहिले दशैं तिहारको माहोलमा खासै केही गरेको छैन । साथीभाईसँग भेटघाट, रमाइलो त्यही नै हो ।
मैले अहिलेसम्म दशैंमा टीका लगाएको छैन । हाम्रो परिवारमा कसैले पनि टीका लगाउदैन त्यसैले मैले सानैदेखि टीका लगाएको छैन । दशैं तिहार नै हामीले खासै भन्नुपर्दा मान्दैनौ, हामीले ल्होसारहरु चैं मनाउछौं त्यति हो । त्यसैले दशैंको त्यति योजना बनाएको छैन ।
तर दशैंको पर्सिपल्ट अन्नपूर्ण ट्रेकिङ गर्न जाने योजना बनाएको छु ।
नबिता श्रेष्ठ (टेबलटेनिस खेलाडी)
हामी ब्याडमिन्टन खेलाडीको शनिबार पनि बिदा हुँदैन । अहिले बन्द प्रशिक्षणमा बसेका छौ । ट्रेनिङ गर्यो, होटल आयो, खाना खायो, आराम गर्यो हामीलाई त दशैं आएको जस्तो नै महसुस भएको छैन ।
दशैंको बिदा भनेर प्रशिक्षक तथा खेलाडीलाई थोरै समय बिदा दिएको छ । तर, दशैँमा घर जान्छु। त्यसैको भोलिपल्टबाट हाम्रोमा तीन दिनको लागि पुजा सुरु हुन्छ, भोजहरु हुन्छ ।
टिकाको दिनमा ठूलो बडाको हातबाट टिका लगाएर आर्शीवाद लिन्छ । मेरो धेरै परिवार छ त्यसैले टिका लाउदैमा फुर्सद हुँदैन । फुर्सद भएपछि साथीभाइ तथा इष्टमित्र जम्मा भई तास खेलेर रमाइलो गरिन्छ ।
धेरै बिदा छैन त्यसैले टिकाको भोलिपल्टको राति पुन बन्द प्रशिक्षणमा फर्कन्छु ।
आयशा शाक्य (तेक्वान्दो खेलाडी)
ट्रेनिङ पनि छ यसकारण यसपाली दशैं काठमाडौंमा नै मनाउने योजना बनाएका छौं, घर (धनगढी) जाँदैनौ । यहाँ पनि दशैंमा हामीमात्र हुन्छौ । मम्मी, बुवा भाइकोमा अष्ट्रेलिया जानुहुन्छ । हामी र भाइ बुहारीलाई टिका लगाएर दशै मनाउछौ ।
पहिला गाउँ जान्थ्यौ । हाम्रो कुल देवताकोमा नवरात्री बस्नुहुन्थ्यो । त्यहाँ मेला लाग्थ्यो, रमाइलो गरिन्थ्यो ।
योभन्दा पनि पहिला त बन्द प्रशिक्षणमा कम नै छुट्टी हुन्थ्यो वा पाइदैनथ्यो । बिदा कम हुनुमा कसैको दोष छैन । तर पनि यसपाली ५ दिन छुट्टी दिनु भनेबको पनि ठूलो हो । मिसन भएको कारणले गर्दा राम्रै हो भन्ने लाग्छ मलाई । त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको छैन ।
रमाइलो लागेको छ । ट्रेनिङ भनेर परिवारसँग बस्न पाइदैन, दशैं आएपछि बिदा हुन्छ । रमाइलो गर्न पाइयो । यस्तो बिजी सेड्युलमा परिवारसँग समय बिताउनु नै ठूलो लाग्छ । त्यहीं कारणले रमाइलो लागिरहेको छ ।
अरुणा शाही (भलिबल खेलाडी )
दशैं सुरु भईसक्यो । तर, हाम्रो मुख्य फोकस त खेलमा नै छ । दशै त सधै मनाइरहेको हो । पहिला आफन्तहरुलाई भेट्ने टिका लगाउने, ठूलोहरुको आर्शीवाद लिने, त्यस्तै गरेर मनाइन्थ्यो अहिले परिवारसँग त्यति टाइम स्पेन्ट गर्न पाइदैन, समय थोरै छ । हामी गएर टिका लगाएर फकिन्छौ । हाम्रो लक्ष्य दक्षिण एसियाली खेलकुदमा छ । त्यसको अगाडि सेन्ट्रल जोन भलिबल पनि छ । त्यो भएको हुनाले अहिले हामी दशैं भन्दा पनि खेलमा नै फोकस छौ ।
रत्नजित तामाङ (ब्याडमिन्टन खेलाडी)
हाम्रो आर्मीहरुको वल्ड मिलिट्री खेल चीनमा हुँदैछ यहीं असोज अन्तिम सातामा त्यसैले दशैंमा घर (भोजपुर) जाँदिन । यसपालीको दशैं यतै नै हुन्छ ।
त्यहीं पनि दशैं सानैदेखि नै त्यति मनाएको छैन । तर तिहार चैं राम्रोसँग मनाउछौ । बुवा, मम्मी उता घरमा हुनुहुन्छ दिदीहरु यतै हुनुहुन्छ, त्यसैले यतै हुन्छ । तैपनि दशैं भन्दा पनि म यहि खेलको लागि व्यस्त छु, फोकस छु ।
प्रतिभा माली (भलिबल खेलाडी )
दशैंको योजना त केही छैन । म त सानैदेखि भलिबल खेल्दै आए । दशैं तिहार भनेको हाम्रो स्कुलमा बिदा धेरै हुन्थ्यो त्यो भएर जहिले पनि के आउथ्यो भने दिमागमा धेरै खेल्न पाइन्छ, खुशी लाग्थ्यो । स्कुलको पछिको समयमा खेलिरहेको हामीलाई धेरै बिदा पाउदा धेरै खुशी लाग्थ्यो । सबैजना घर जानुहुन्थ्यो अनि म सरसँग धेरै खेल्न पाउछु भन्ने खालको सोच मेरो बच्चैदेखि हुन्थ्यो । अहिले घरमा एकछिन समय बिताउने त्यहिँ योजना ।
माला राई (बक्सिङ खेलाडी)
दशैं झापामा मनाउने छु । परिवार तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरिन्छ । टिकाको दिन ठूलाको हातको टिका थापेर आफ्नो माइती आउछु । त्यहाँ टिका लगाउछु । आफन्तजन भेटेर पोखरा फर्किहाल्छु ।
थोरै बिदा छ चारैैतिर भ्याउनु पर्छ । त्यहीं भएर जाने टिका थाप्ने फर्कि हाल्ने ।
थोरै बिदा दियो भनेर नराम्रो त लागेको छैन । दशैं त अर्काे साल पनि आउछ, खेल हो ठूलो कुरा । अर्काे सालपनि आउछ दशैं अर्काे साल जान्छु र रमाइलो गर्छु ।
रेश्मा भण्डारी (भलिबल खेलाडी )
हामी अहिले बन्द प्रशिक्षणमा छौं । यस पटक कम बिदा छ । छोटो बिदाले मलाई त खासै त्यस्तो केही भएको छैन । मेरो घर यही छ ।
दशैंमा अहिलेसम्म घरबाट बाहिर बसेको छैन । सधै परिवासँगै बसेर मनाएको छ । यसपालि पनि सँगै मनाउन पाउदा खुशी लागेको छ । र, अन्त्यमा सबैजनालाई ‘ह्याप्पी दशैं’ भन्न चाहन्छु ।
कान्छीमायाँ कोजु (एथलेटिक्स खेलाडी)
यसपाली हामीले दशैं मनाउनु हुन्न । दशैं मनाउन नभएपनि यो समयमा परिवारसँग बसेर समय बिताउने छु । परिवारसँग नै रमाउछु ।
हाम्रो नेवारहरुको पुजा पनि गर्नुपर्छ त्यसैले बढी पूजामा व्यस्त हुन्छ । अहिले म आफ्नो नियमित ट्रेनिङ हलचोकमा गएर गर्छु । दशैं भएपनि जे भएपनि एक टाइम आफ्नो ट्रेनिङ गर्छु ।